Women Contributing to Peace - ISP Myanmar Peace Desk
Women Contributing to Peace
ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်စဉ်များတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ပါဝင်မှုသည် ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်များ ရရှိနိုင်ခြေ သိသာစွာ မြင့်မားကြောင်း လေ့လာချက်များ၌ ဖော်ပြလေ့ ရှိပါသည်။
ယခုစာမျက်နှာတွင် မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်နှင့် သက်ဆိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများ၌ ပူးပေါင်း ပါဝင်နေသော အမျိုးသမီးများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ယင်းသို့ ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် ကာလရှည်ကြာ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းရာ၌ လိုအပ်သော အရည်အချင်းများရှိသည့် အမျိုးသမီးများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် “မရှိ” ဟူသော အဆိုကို ပုံကားချပ်များ ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် တုံ့ပြန်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Studies show that women’s meaningful participation in the peace process considerably increases the likelihood thatapeace agreement will lead to sustainable peace.
On this page, it exhibits about women organizations participating on current peace initiatives in Myanmar. By illustrating the wide range of women and organizations engaged in peace-related activities across the country, these maps counter the claim that there are no women in Myanmar with the expertise needed to resolve longstanding conflicts.
Women Contributing to Peace: Quick Start Guide
အောက်ဖော်ပြပါ ပုံကားချပ်များတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် လူသိများ ထင်ရှားသော ခေါင်းဆောင်များအပြင် လူသိနည်းသော ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ စည်းရုံး လှုံ့ဆော်နေသူများကိုလည်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ပုံကားချပ်များကို USAID ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် Nonviolent Peaceforce အဖွဲ့က ပြုစုထားခြင်းကို ISP Myanmar Peace Desk က ဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံသိရှိလိုပါက [email protected] သို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
These maps purposely include well-know leaders as well as peace advocates who are less visible. The studies are initially conducted by Nonviolent Peaceforce with the assistance of USAID and ISP-Myanmar PeaceDesk bring them up again in our site. For more information, please contact directly to [email protected]
လူကြီးမင်းတို့၏သင်တန်းများ၊ အစည်းအဝေးများနှင့် ပွဲများတွင် ပိုမိုများပြားသော အမျိုးသမီးများ တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ဖိတ်ကြားရန်။
အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် အမျိုးသမီးများကို ရှာဖွေနိုင်ရန်။
သဘောထားနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ စာတမ်းများတွင် အမျိုးသမီးများပူးပေါင်း ပါဝင်ရန်အတွက် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့် အဆိုပါ စာတမ်းများကို ပိုမိုများပြားသော အမျိုးသမီးများဆီသို့ မျှဝေနိုင်ရန်။
အမျိုးသမီးများ ထုတ်ဝေသော သုံးသပ်ချက်များနှင့် အစီရင်ခံစာများကို ပို၍ဖတ်နိုင်ရန်။
လူကြီးမင်းတို့၏ ရှေ့ ဆက်လုပ်ဆောင်မည့် ပွဲများတွင် အမျိုးသမီးများကို သင်တန်းဆရာ၊ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ၊ ဦးဆောင်ပံ့ပိုးသူ၊ ဟောပြောသူ (သို့မဟုတ်) သင်တန်းဆရာအဖြစ် ပါဝင်ရန်အတွက် အခိုင်အမာ တောင်းဆိုရန်။
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူများအဖြစ် အမျိုးသားများချည်းသာ ပါဝင်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်။
သတင်းဆောင်းပါးများနှင့် အခြားသော သုတေသနများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ထည့်သွင်းရန်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ပွဲများကို စိတ်တူကိုယ်တူရှိသော စည်းရုံးလှုံ့ဆော်သူများနှင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စည်းရုံး လှုံ့ဆော်နိုင်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်း အခွင့်အရေးများကို ရှာဖွေရန်။
အဓိကကိစ္စရပ်များတွင် ကျွမ်းကျင်သော အမျိုးသမီးများ ပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်။
အချက်အလက်များကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီအတွင်း ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။ အချက်အလက်တွင် ဖော်ပြခံရသော အမျိုးသမီးများ၏ သဘော တူညီမှုကို ရရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းများသည် အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ ရာထူးများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုဘဲ ထည့်သွင်းထားပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ၎င်း တို့ အချိန် အများဆုံးနေထိုင်သည့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် စာရင်း ပြုစုထားပါသည်။ ပုံကားချပ်များတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ၌ ဆွေးနွေးသော အဓိက ကဏ္ဍငါးခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့၏ ကျွမ်း ကျင်ရာ နယ်ပယ်များကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ တက်ရောက်သူ တရားဝင်စာရင်း မရှိသဖြင့် ယခု ဖော်ပြထားသော ပုံကားချပ်များတွင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် (သို့မဟုတ်) လေ့လာသူအဖြစ် တက်ရောက်သည်ဟု ၎င်းတို့ ကိုယ်ကိုင် ဖော်ပြသော အမျိုးသမီးများကိုသာ ထည့်သွင်းထားပါသည်။
အမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်စားပြုမှု အမျိုးမျိုးရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ယခု ပုံကားချပ်များတွင် တဦးကို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြင့် တွဲလျက်ဖော်ပြထားသော်လည်း ထပ်တိုး အချက်အလက်များကို အွန်လိုင်းစာရင်း၌ ရယူနိုင်ပါသည်။
ပုံကားချပ်များသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မပြည့်စုံမှုများရှိနေပါသည်။ အချို့သော အမျိုးသမီးများသည် အချက်အလက်များ ကို ပံ့ပိုးပေးရန် ငြင်းဆန်ခြင်း၊ အချက်အလက် တောင်းဆိုမှုကို ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မရှိကြသကဲ့သို့ အချက်အလက်များ ရှာဖွေရာ တွင်လည်း ခက်ခဲမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ အချို့သော အဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်များ အကြောင်းကို အသိပေးခြင်း မပြုရန် မူဝါ ဒများ ရှိကြသည်။ ယခု ပုံပြကားချပ်များသည် ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော သူများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့သော် ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သူတိုင်းကို ထည့်သွင်းထားနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
အချို့သော နိုင်ငံရေးပါတီများသည် အချက်အလက် စုဆောင်းချိန်တွင် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းသွားကြပါသည်။
Invite more women to attend your trainings, meetings, and events.
Find technical expertise among women to draw upon.
Ask women to contribute to policy and position papers, and share them with more women.
Read more reports and analysis produced by women.
Insist that women serve as panelists, moderators, guest lecturers, or trainers at your next event.
Reward organizations that include women in key roles by attending their events.
Quote women in news articles and other research.
Organize peace events with likeminded advocates.
Identify opportunities for coalition and alliance-building to advocate for peace.
Support women developing expertise in key issue areas.
Data was collected from August 2018 to January 2019. Women provided their consent to be included. Due to their public position, elected and public officials were included without being contacted.
Women are listed by the state or region where they spent most of their time. Women listed on the maps have self-identified their main area(s) of expertise as it relates to the five themes under discussion at UPC.
As no official list of Union Peace Conference attendees exists, the map includes women who self-identified as having attended asaUPC delegate and/or observer.
Many women wear multiple ‘hats.’ This map lists one organization per person; additional information is available online.
The maps are, by necessity, incomplete: some women declined to provide information, some were difficult to find or did not respond toarequest for information, and some organizations have policies to not disclose members. These maps attempt to understand who is engaged, but do not claim to include everyone.
Some political parties have merged since data collection.
အချက်အလက်များ မျှဝေပေးသောသူများ၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process (AGIPP)၊ Women’s League of Burma (WLB) နှင့် ၎င်းတို၏ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ Cate Buchanan, DAI နှင့် ပထမပိုင်းတွင် ထုတ်ဝေထားသော ပုံကားချပ်များကို ပြန်လည် စိစစ်ပေးသော တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတွင် လုပ်ကိုင်နေသော အမျိုးသမီးများအတွက် တန်ဖိုးရှိ၍ အားလုံး ပါဝင်သော ပုံကားချပ်များ ရရှိရန် လူကြီးမင်းတို့၏ ကြိုးပမ်းမှုနှင့် မျှော်မှန်းချက်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
We are grateful to everyone who contributed to this resource, particularly the women who provided information. A special thank you to the Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process (AGIPP), the Women’s League of Burma (WLB) and its member organizations, Cate Buchanan, DAI, and all who reviewed earlier versions. Thank you for the vision and effort to help us make these maps are inclusive andavaluable tool for women working on peace.